Finoana Katolika: Inona ny Batemy
dimanche, 31 mars 2019 12:15
Ny Batemy dia iray amin'ireo Sakramenta 7
- Ny Filaharana (Ordination, fanamasinana Pretra)
"Ny Batemy masina no fototry ny fiainana Kristianina manontolo, tokonam-baravaran’ny fiainana ao amin’ny Fanahy (vitae spiritualis ianua), sy varavarana izay manokatra ny fidirana amin’ireo sakramenta hafa. Tamin’ny Batemy isika no nafahana tamin’ny fahotana sy nateraka indray ho zanak’Andriamanitra, manjary rantsambatan’i Kristy sy voakambana ho vatana iray amin’ny Fiangonana ary natao ho mpandray anjara amin’ny fanirahana azy: “Ny Batemy no sakramentan’ny fahateraham-baovao amin’ny alalan’ny rano sy amin’ny teny”" (Fanazavan'ny Katesizin'ny Fiangonana Katolika).
Maninona no mbola kely dia atao Batemy ny ankizy?
Raha ny sary matetika hitatsika, dia olon-dehibe atsoboka anaty rano no hita.
Efa tany amin'ny taonjato faha roa tany, dia efa nisy ny Batemin-jaza, ary ny Fiangonana Katolika, dia mandinika, fa efa talohan'izay aza no nisiany, amin'ny maha fanalana ny heloka ny Batemy, famerenana ny Zanak'olombelona amin'Andriamanitra, satria mbola vao teraka isika dia efa voakasiky ny fahotana, na dia mbola vao notoritoronina aza (vao nanomboka nisy tany an-kibondreny).
I Kristy no nilaza, fa avelao ny zaza anantona ahy. Ny Fiangonana dia mamporisika ny fanaovana Batemy ny zaza, ho isan'ny Zanak'Andriamanitra.
Nahoana kosa moa ny zaza tsy manantsiny vao teraka no voasazy lazaina manao fahotana, mitondra ny fahotan'ny lehibe?
Io dia nolovaintsika tamin'ny ota nataon'i Adama sy Eva. Izay hilazana azy, fa ny tiana hambara eo, fa isika lehibe dia nomenan'Andriamanitra fahalalahana, nomena safidy, ny zavatra rehetra ataontsika, dia misy fiantraikany amintsika sy ny manodidina antsika avokoa, na ny tsara na ny ratsy, na ny ota.
Izay no maha iray ny Fiangonana, raha misy marary ny tanana, tsy afaka hilaza ny vava fa tsy mahakasika azy izay, fa dia mitsoka ilay tanana marary ny vava.
Raha misy kosa ny ota ataon'ny Ray an-dreny dia miantraika aty amin'ny zanaka, sy ny fiaraha-monina ihany koa izay. Izay no ilana ny Kaofesy, hibebahana eo anatrehan'ny hafa, sy ny Fiangonana, izay soloin'ny Pretra tena, izay mitana ny tsiambaratelonao, tamin'ny fibebahana nataonao.
Ka ny Batemy izany, dia fanafahana, fanalana ny heloka (fampiasana ny rano), fanamasinana, fanosorana ho Zanak'Andriamanitra (fampiasana ny menaka voamasin'ny Eveka), fahazavana, fidiran'ny Fanahy masina (fampiasana ny labozia, hazavana nalaina tamin'ny Jiron'ny Paka, fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty), fahadiovana (fampiasana ny akanjo fotsy).
Inona no asan'ny Parrain na Marraine, Ray na Reny amin'ny Batemy, tsy maintsy Katolika ve? Inona no fepetra?
Rehefa atao Batemy ny zaza, dia amin'ny maha zaza azy izay, dia mbola tsy manan-tsafidy izy, ka ny Ray aman-dreny sy ny mpiantoka amin'ny Batemy (Parrain na Marraine), no miantoka ny hitaiza ilay zaza amin'ny lalan'ny Fiangonana Katolika. Rehefa vory saina izy (10 taona any), dia mandray ny Sakramenta faharoa, ny sakramentan'ny Eokaristia, na ny Kaominio voalohany (Première Communion), fandraisana ny vatan'i Kristy.
Rehefa lehibe kosa izy, ary tompon-tsafidy dia mandray ny Sakramenta fahatelo, ny Sakramentan'ny Fankaherezana (Confirmation), eo dia ny Eveka no mandray io fihekem-pinoana mandrakizay io, izany hoe fanamafisanao ny Batemy izay noraisinao fony kely, ary mihiniana ny tsy hivadika mandra-maty amin'ny maha Kristianina Katolika anao, mila Parrain na Marraine ihany koa eo, tsy voatery ilay tamin'ny Batemy akory.
Tsy maintsy Katolika vita Confirmation ny Parrain na ny Marraine, hiara-dalana aminy amin'ny fiainam-panahy, tsy azo atao ny Ray na Reny niteraka ny Parrain, na Marraine.
Ny tanora na olon-dehibe vita confirmation izany dia mitovy laharana amin'ny Pretra eo, amin'ny iraka atao ho an'ny Fiangonana, ny asa sy andraikitra no samihafa, fa Laika feno eo, hamita ny Iraky Kristy maneran-tany, sy izay toerana rehetra misy anao.
Nahoana ny Pretra no tsy manaiky hanao Batemy ny zaza raha tsy vita mariazy ny Ray aman-dreny?
Matetika dia misy no tezitra hoe, maninona ny zaza tsy manan-tsiny no tsy eken'ny Pretra atao Batemy, nefa ny Ray sy Reny niteraka azy tsy vita mariazy, na tsy hita izay nalehan'ny Ray niteraka, na ny Reny niteraka, na izy roa, fa taizan'ny Bebe sy Dadabe.
Ny Fiangonana Katolika dia mametraka ho zava-dehibe ny fiainan-tokantrano, sy ny fianakaviana, izay fatoran'ny Sakramentan'ny Mariazy.
Ka raha ny Ray amandreny niteraka aza tsy vonona hiroso amin'ny fifampifehezan'ny tokan-trano, amin'ny alalan'ny fanambadiana, ka nahoana ny zaza no aroso ho fatorana eo anivon'ny Fiangonana. Ny Ray aman-dreny no miantoka ny fanabeazana ny zaza, ao anatin'ny Finoana Katolika, ka takian'ny Fiangonana ny fitondran-tena mendrika ho an'ireo ray aman-dreny.
Ny zaza anefa tsy tompon'ny olan'ny Ray aman-dreny, ka tsara hatrany ny manantona ny Pretra, manao dinika momba ny Batemy, izy no afaka mandray fanapahan-kevitra momba izay olana misy.
Tsy maintsy ny Père Curé, na ilay Pretra miandraikitra ny Paroasy, misy ny toeram-ponenanao ihany no manome alalana Pretra hafa, raha te hanao Batemy manokana miaraka amin'ny Pretra hafa, izany hoe any amin'ilay mopera misy ny fonenanao, na Paroasy ihany no misoratra amin'ny bokim-piangonana ianao, izay soratana ihany koa amin'ny bokim-pianakaviana Katolika, ahitana ny mariazy, ny zaza rehetra teraka, sy ireo vita Batemy.
Na mipetraka ivelan'ny Madagasikara aza ianao, dia ny Pretra ampanao Mariazy anao, dia tsy maintsy mitaky izany acte de Baptême izany avy any amin'ny toerana nanaovana Batemy anao.
Raha tsy hita ny acte de Baptême, azo averina atao Batemy ve?
Tsy azo averina in-droa ny Batemy, satria efa Zanak'Andriamanitra ianao, fa tadiavo ny toerana nanaovana Batemy anao. Kajio hatrany ny Bokim-pianakaviana Katolika, fa voasoratra ao avokoa ny fiainam-pianakaviana ara-pinoana anao.
Misy Batemy faobe ve amin'ny Katolika?
Ny Batemy dia ho an'olon-tokana, tononina mihitsy ny anaran'ny zaza, ny fanaovana Batemy, noho ny fandaminana dia azo atao miaraka, fa atao Batemy tsirairay ny zaza mandritra izany.
Afaka atao Batemy ve raha efa lehibe?
Afaka atao Batemy ny olon-dehibe, fa misy fampianarana manokana, satria ny azy mety avy dia ampiarahina avokoa, ny Sakramenta telo, ny Batemy, ny Eokaristia, ny Fankaherezana, miankina amin'ny Pretra eo.
Iza no afaka manao Batemy? Afaka manao Batemy tena ve?
Ny Pretra, na ny Diakra, izay nomena fahefana amin'izany, dia afaka manao Batemy.
Tsy afaka manao Batemy tena.
Raha ambavahoanan'ny fahafatesana ianao, ka tsy misy olona eo, dia mivavaha, amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, sy Fanahy Masina, mibebaha, fa ahita ny Tavan'Andriamanitra ianao.
Tsy misy tara izany ny Famindrampon'Andriamanitra, fa na inona fotoana, na aiza no misy anao, dia antsoy amin'ny Anarany izy, dia ho avy hamonjy anao Andriamanitra.
Raha misy olona ho faty, nefa tsy vita Batemy, ka mila izany an-tsitrapo, nefa tsy mahita Mopera, na Diakra hanao Batemy, dia izay rehetra vita Batemy dia afaka manao Batemy azy.
Mivavaha miaraka amin'ilay olona ambavahoanan'ny fahafatesana, raha mbola mahatsiaro saina izy, mivavaha irery kosa raha efa tsy afaka hanao izany intsony izy.
Mangalaha rano, areheto ny labozia raha misy.
Ataovy Batemy izy: "Tonony ny anarany...Izaho...."ny Anaranao".... dia manao Batemy anao amin'ny anaran'i Ray, ny Zanaka, sy ny Fanahy Masina, Amen".
Aorian'izay, dia manantona Pretra.
Raha mangataka Kaofesy izy, dia raiso ny fifonany.
Dia manantona Pretra aorian'izay.
Ary raha tsy vita Batemy ihany koa ianao, nefa misy olona ho faty mangataka atao Batemy?
Dia mivavaha arak'izay fantatrao sy ao amponao, antsoy amin'ny vavaka ataonao ny Fanahy Masina, dia ataovy Batemy ilay mangataka atao Batemy, azonao atao izay amin'ny anaran'ny Trinité Masina (ny Ray, ny Zanaka, ny Fanahy Masina).
Ny olona rehetra dia nomen'Andriamanitra fahefana hanavotra ny namany.
Dia vita izay, dia mirosoa eo anivon'ny Pretra hanaovanao Batemy ihany koa.
Ahoana raha vita Batemy amin'ny finoana hafa, eken'ny Finoana Katolika ve?
Eken'ny Finoana Katolika ny Batisa, na Batemy amin'ny Finoana Kristianina ao anatin'ny FFKM.
Raha hifindra Katolika kosa ny olona iray efa vita Batisa, dia misy fihofanana omena azy, ary ampiana ny fanosorana menaka, izay menaka namasinin'ny Eveka. Tsy averina intsony ny fanaovana Batemy.
Ahoana ny Batisa efa vita tamin'ny finoana ankoatran'ny FFKM?
Hatreto ny ezaka fampiraisana ny Fiangonana dia mbola eo amin'ireo Fiangonana efatra ireo ihany, no misy fifanantonana finoana (EKAR - FJKM - EEM - FLM), tsy midika ho fanilihina akory izay, fa entina am-bavaka hisian'ny fifanantonana hatrany.